Ama-movie angama-60 amahle kakhulu wezothando wesikhathi sonke - Izindaba
Ama-movie angama-65 amahle kakhulu wezothando wesikhathi sonke
Noma ngabe uyakukhathalela ukukuvuma noma cha, wonke umuntu uthanda okuhle imovie yothando . IHollywood ibungcweti bokuhudula izinhliziyo zethu ngezindaba zezindaba ezifanelekile, kusuka Kuzalwa Inkanyezi uku Incwajana . Kepha-ke, lokhu kuklwebheka kuphela iziqu eziningi zothando. Siqoqe ama-flick amahle kakhulu, abhubhisayo, anothando futhi angama-mushy eminyakeni edlule. Lapha, ama-movie angama-65 amahle kunawo wonke ezothando azokwenza uhleke, ukhale futhi, yebo, ukholwe othandweni lweqiniso.
OKUSHIWO: Amahlaya ayi-10 Ahamba phambili Wothando Esikhathini Sonke
Izithombe ze-Fox Searchlight
Udokotela owelapha ngokomzimba, uLeslie Wright (iNdlovukazi uLatifah), ubeka umsebenzi wakhe wamaphupho esebenzela umdlali we-basketball okhokhelwayo, uScott McKnight (Ojwayelekile). Izinto zithatha ukuguquka kwezothando lapho eqala ukuwela isiguli sakhe esisha, esingamnaki ngokuphelele ukuthinta kwakhe okungaphezulu.
Buka ku-Amazon Prime
2. 'Emoyeni Wothando' (2000)
Ihlelwe ngo-1960s eHong Kong, le filimu eshuthwe kahle ikhuluma ngendaba yomakhelwane ababili (edlalwa nguTony Leung noMaggie Cheung) abalingani babo abathandanayo. Njengoba bebhekene nalokhu kungathembeki, bobabili baqala ukuchitha isikhathi esithe xaxa ndawonye futhi ekugcineni bakhulise imizwa komunye nomunye.
Qasha ku-Amazon Prime
3. 'Inkanyezi Iyazalwa' (2018)
Lapho umculi odumile uJack (uBradley Cooper) ethola ngengozi (futhi ethandana) nomculi odonsa kanzima u-Ally (uLady Gaga), umletha endaweni ebonakalayo futhi aqale umsebenzi wakhe. Kepha njenganoma iyiphi indaba yothando olukhulu, usizi seliseduze.
Izithombe Zomhlaba Wonke
4. 'iNotting Hill' (1999)
Nami ngiyintombazane nje, ngimi phambi komfana, ngicela ukuthi angithande. Gah, asinandaba nokuthi ijabulisa kangakanani, le ndaba ephathelene nomnikazi wesitolo sezincwadi waseNgilandi (uHugh Grant) nomlingisi odumile waseMelika (uJulia Roberts, ngokudlala yena uqobo) iyigolide le-rom-com elimsulwa.
I-Line Line entsha
5. 'Uthando neBasketball' (2000)
UMonica (Sanaa Lathan) noQuincy (Omar Epps) bangabangani ababili bezingane abanephupho elifanayo lokuncintisana: ukuba ngumdlali we-basketball okhokhelwayo. I-movie ilandela uhambo lwabo lweminyaka njengoba bephoqeleka ukuba bakhethe phakathi kobudlelwano babo nemisebenzi abayifufusa.
6. 'Uthando Empeleni' (2003)
Iqembu lezinkanyezi (uHugh Grant noColin Firth lifakiwe) zama ukuthola impilo yabo yothando ngokuhleka okuningi nezinyembezi eziphonswe kule ngxube. Futhi, kunesembozo esihle seMariah Carey's All I Want for Christmas. ' (Kepha ungayibuka ngokuphelele le unyaka wonke.)
OKUSHIWO: Imibuzo Elukhuni Kakhulu 'Yothando Empeleni' ku-Intanethi
7. 'Kwenzekile Ngobusuku Obunye' (1934)
Le-oldie kodwa i-goodie izungeze i-heiress eyonakele (uClaudette Colbert) obalekela umndeni wakhe futhi ahlangane nendoda ebukekayo (uClark Gable) ozimisele ukumsiza. Isiqubu? Isihambi esinomusa empeleni siyintatheli sifuna indaba. Le bekuyi-movie yokuqala ukuwina yonke imiklomelo emikhulu emihlanu ye-Academy (Best Picture, Director, Actor, Actress and Screenplay).
8. 'Ukukhanya kwenyanga' (2016)
Kulandela insizwa emnyama emnyama ezahlukweni ezintathu ezahlukene zempilo yayo. Endleleni, ubuza ubulili bakhe, ahlangane nabangane abasha futhi afunde incazelo yangempela yothando. O, futhi sishilo ukuthi iwine i-Oscar Award ye-Best Picture? (Uxolo, ILa La Land .)
Lapho intombazane encane futhi ekhohlisayo, u-Amélie (Audrey Tautou), ethuthela enkabeni yeParis ukuba abe uweta, uthola umcebo olahlekile womuntu owayehlala endlini yakhe bese ethatha isinqumo sokunikela ngempilo yakhe ukusiza labo abaseduze kwakhe . Uhlangana nabalingiswa abaningi abanemibala endleleni kufaka phakathi okungaba ngumdlalo wakhe ophelele. Charming, kumnandi futhi zakudala osheshayo.
10. 'Isipoki' (1990)
Indaba ebanga usizi kulandela uMolly Jensen (Demi Moore), umculi obhekana nokulahlekelwa ngumyeni wakhe amthandayo, uSam Wheat (uPatrick Swayze), obuyela emhlabeni njengomoya ongenamandla. Awukaze uphile uze ubone leso sigcawu noMoore, uSwayze nobumba oluthile olungcolile.
Yeqa iBolen / NETFLIX
11. 'Izinyoni zothando' (2020)
Izikhathi ngaphambi kokuhlukana, uLeilani (Issa Rae) noJibran (Kumail Nanjiani) bahileleke ngephutha ohlelweni lokubulala. Besaba ukubiyelwa, laba baqala uhambo lokusula amagama abo. Bangakwazi yini ukusindisa ubudlelwano babo phakathi kwezimo ezingaqinisekile neze?
12. 'An Officer and A Gentleman' (1982)
Ngenkathi Owesifazane omuhle iyi-rom-com classic yangempela, lo mdlalo kaRichard Gere omayelana nensizwa ephothula ukuqeqeshelwa ukuba ngumshayeli wamasosha asolwandle ukubukeka okuvuthiwe kothando nokukhula komuntu. Gcina izicubu zilindile — uzosibonga ngokuhamba kwesikhathi.
I-Warner Bros. Izithombe
13. 'ICasablanca' (1942)
Abanye bazamile, kepha akukho mbhangqwana wababhayisikobho onjengo-Ilsa noRick (u-Ingrid Bergman noHumphrey Bogart) abakulolu thando lwesikhathi sempi olumayelana namalangabi amabili amadala awela izindlela ngemuva kweminyaka yokungaxhumani. (Amafilimu amnyama namhlophe FTW.)
OKUSHIWO: Imibhangqwana Yama-Movie Enesithunzi Kakhulu Yesikhathi Sonke
14. 'I-Basmati Blues' (2017)
Usosayensi osemncane, uLinda (Brie Larson), uthunyelwa eNdiya esabelweni sokuyothengisa ilayisi eliguqulwe izakhi zofuzo. Lapho ezwa ukuthi kuzokonakalisa imisebenzi, uhlangana nomlimi wendawo ogama lakhe linguRajit (Utkarsh Ambudkar) ukwenza izinto zilunge.
15. 'Indaba Yothando' (1970)
Asinaso isiqiniseko sokuthi singangena esikebheni ngalomugqa wokugcina odumile we-Flick, Uthando lisho ukuthi ungalokothi uthi uyaxolisa (akunjalo), kepha le '70s cult classic ilungele lobo busuku lapho ufuna nje ukukhala okuhle kabi.
OKUSHIWO: Imibukiso eyi-10 ye-TV ozoyibuka lapho udinga ukukhala okuhle
16. 'Okuthile Okusha' (2006)
IKenya (Sanaa Lathan) idabukile phakathi kwamadoda amabili ahluke ngokuphelele. (Kuzwakala kujwayelekile?) Konke kuqala lapho ehlehla ekubeni yisikhathi esiyimpumputhe ngemuva kokubona ukuthi umkhonzi wakhe akayona iMnyama. Ngabe uzovumela ukukhetha kwakhe kwangaphambilini kumvimbe ekutholeni umphefumulo wakhe?
17. ‘Isidlo sasekuseni eTiffany’ (1961)
Lawo maparele, i-Givenchy LBD nalokho okuyisithonjana 'do-lokhu okudala kufanelekile ukubukela isitayela esithandekayo sikaHolly Golightly's (Audrey Hepburn) sisodwa. Kepha le ndaba isuselwa ku-novella edumile kaTruman Capote inokuningi okunye engakwenza - amahlaya, ezothando nezindawo ezinesibindi zase-Upper East Side.
Olunye uthando lwenzelwe ukugoqana ne-S.O yakho. nokuqinisa uthando lwenu komunye nomunye. Abanye, njengale, babukwa kangcono bodwa (noma nabangane bakho). Ukuboniswa okuhlekisayo komshado nobuhlungu benhliziyo lapho kuhlangana khona uRyan Gosling noMichelle Williams.
USarah Shatz / Netflix
19. 'Umuntu Omkhulu' (2019)
Kungenzeka kungabi neziphetho ezijabulisa kakhulu, kepha le movie ilandisa ngendaba yentombazane (uGina Rodriguez) olahlwa yisoka lakhe. Ngakho-ke, uqala i-hoorah eyodwa yokugcina nezintombi zakhe eziseduze ngaphambi kokuthuthela eSan Francisco ukuqala kabusha.
Izithombe zeBuena Vista
20. 'Ubuhle Nesilo' (1991)
Le filimu ehehayo yesithombe ehehayo yesandla ye-Disney iyi-classic yeminyaka yonke. Kahle kahle? I-remake ka-2017 enenkanyezi u-Emma Watson njengo-Belle noDan Stevens njenge-Beast. I-live-action version inikeza inganekwane ukuguquguquka kwesimanje, kwesifazane esingakubonanga kuza.
Bukela kuDisney +
Ama-Amazon Studios / amaLionsgate
21. 'Abagulayo Abakhulu' (2017)
Lokhu akuyona i-rom-com yakho ejwayelekile. Esikhundleni salokho, le filimu ehlekisayo futhi ehlakaniphile (isuselwa kuKumail Nanjiani kanye nendaba yothando ye-IRL ka-Emily Gordon) ihlola izingqikithi ezihambisana namasiko futhi izizwa iqabula ngokujabulisayo. Usomahlaya owazalelwa ePakistan uNanjiani (odlalwa nguyena) uwela isitshudeni esingu-Emily Gardner (Zoe Kazan), kepha lapho ethola ukugula okuyindida okumshiya ekuqulekeni, uKumail kumele abhekane nabazali bakhe, umndeni wakhe kanye nemizwa yakhe yangempela.
22. 'Gxila' (2015)
Lapho umakadebona ongumculi (uWill Smith) ethatha umqaphi (uMargot Robbie) ngaphansi kwephiko lakhe, akubanga isikhathi eside ngaphambi kokuba ubungani babo buphenduke obothando. Lokho wukuthi, aze ahlukane naye futhi abe ngumuntu wesifazane onolwazi. * Kungezwa kulayini wokusakaza *
23. 'Indaba eseNtshonalanga' (1961)
Ngasohlangothini lwasentshonalanga olungenhla, amaqembu ezigelekeqe amabili — amaShark namaJets — alwela ukulawula indawo. Izinto ziba nzima lapho ilungu lamaJets uTony (Richard Beymer) ewela uMaria (Natalie Wood), udadewabo womholi wamaSharks. YiRomeo noJuliet yanamuhla enomculo womculo.
24. ‘Iholide laseRoma’ (1953)
Kwethulwa U-Audrey Hepburn Ifilimu yokuqala ekhuluma ngenkosazana ebalekela ababheki bayo bese ithandana nephephandaba laseMelika (uGregory Peck) eRome. Iheha ngokumangalisayo, iyathandeka futhi kufanele ibukwe i-movie yakudala abalandeli.
25. 'Isithombe' (2020)
Lapho umama kaMee (Issa Rae) eshona kungalindelekile, usale enemibuzo eminingi. Ngemuva kokuthola isithombe esidala sikamama wakhe ongasekho, ungena emlandweni womndeni wakhe okokuqala ngqa, okuholela othandweni olungalindelekile. Ubunathi e-Issa Rae.
Izithombe Zokusesha zeFox / Amafilimu eMiramax
26. 'IGarden State' (2004)
UZach Braff uqondise futhi wadlala kule filimu emnandi futhi ezwelayo mayelana nensizwa enezinkinga (Andrew) ebuyela ezweni lakubo eNew Jersey emngcwabeni kanina ngemuva kokuhlukaniswa nomndeni wakhe. U-Natalie Portman ubambisene nezinkanyezi njenge-quirky love interest enezinye izinhlamvu ezingekho emthethweni kanye nengoma ebulalayo.
27. 'Incwajana' (2004)
O, woza. Bekufanele sifake le ndaba yakudala emayelana nemibhangqwana eshaye izingqinamba ukuthola indlela yokubuyela komunye nomunye. Leyo ndawo enoNowa (Ryan Gosling) ememeza Ufuna ini? e-Allie (Rachel McAdams) uzogadla unomphela.
Kusuka endodeni engemuva Uthando Empeleni, Notting Hill futhi IDayari kaBridget Jones kuza le-flick evuselelayo mayelana nensizwa eyabona ukuthi inekhono lokuhamba isikhathi. Isikhumbuzo esihle sokubonga nsuku zonke (nokuthi uRachel McAdams uyamangalisa kukho konke).
StudioCanal / Inkampani Weinstein
29. 'uCarol' (2015)
Le melodrama emayelana nabesifazane ababili abathandanayo eminyakeni yama-50s yenziwe ngobuciko futhi igcwele ukuzithoba nomoya. Indaba iqala lapho uTherese Belivet (Rooney Mara) ebona uCarol (uCate Blanchett) esitolo somnyango, kanti okunye sekungumlando.
30. ‘Ukubuyisana’ (2007)
Ngeke ukwazi ukususa amehlo akho esikrinini ngesikhathi ukuthi Isimo emtatsheni wezincwadi noJames McAvoy noKeira Knightley (nengubo yakhe eluhlaza okwesibhakabhaka). Ngokushesha ngemuva kwalokho, izinto zithathe ithuba elibi njengoba laba bathandi bobabili behlukaniswa yimindeni engenelene.
31. 'Ukukhanya kwelanga okungunaphakade kwengqondo engenabala' (2004)
Ngemuva kokwehlukana okubuhlungu, izithandani ebezihlukene (uJim Carrey noKate Winslet) zisula zonke izinkumbulo zobudlelwano bazo kule drama yomdlalo edabukisayo nenenhliziyo eshaya emidlalo yeshashalazi emuva ngo-2004. Bangakwazi yini ukubhekana nokulahlekelwa umuntu ababengamenzanga wazi ukuthi kwakukhona?
hollywood uhlu lwama-movie wothando nolushisayo
32. ‘iTitanic’ (1997)
Asinamahloni okuvuma ukuthi sikubonile lokhu kumatiyethaezimbilikathathu. Futhi noma sazi ukuthi uphela kanjani (isaphangi: umkhumbi uyacwila), izinhliziyo zethu zisamileQhubekagxuma ngenjabulo njalo lapho uJack noRose bedansa ndawonye futhi bedweba imidwebo enqunu.
I-Sony Pictures Classics
33. 'Ngibize Ngegama Lakho' (2017)
Lokhu kuthandana okuqhakazile phakathi komfana oneminyaka eyishumi nesikhombisa kanye nomsizi kababa wakhe ocwaningweni kwenzeka ku-1980s enhle yezithombe e-Italy. Inganekwane yothando lokuqala olususelwa kunoveli ehlonishwayo ka-André Aciman futhi edlala indawo emangalisayo uTimothée Chalamet no-Armie Hammer. Ngabe sidinga ukusho okuningi?
34. 'Ama-Asiya Acebile Ahlanyayo' (2018)
Ngokususelwa kunoveli kaKevin Kwan yango-2013 enegama elifanayo, leli qophelo lezothando yifilimu yokuqala enkulu yaseHollywood enabalingisi nabasebenzi abaningi base-Asia kusukela Iqembu Lenhlanhla ngo-1993 (NBD). Kulandela owokuzalwa eNew York uRachel Chu (uConstance Wu) njengoba ehamba nesoka lakhe, uNick Young (Henry Golding) emshadweni womngani wakhe omkhulu eSingapore. Lapho efika, ufunda ukuthi uNick akacebile nje kuphela kodwa futhi ungomunye wabacwaningi abafanelekile kakhulu ezweni. URachel uzolisebenzisa kanjani leli zwe elisha lomcebo nobukhazikhazi ... nomama wakhe ongamukeleki?
kanjani ukuhlanza ubuhle blender
35. 'Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka umbala ofudumele kakhulu' (2013)
Lapho u-Adèle (Adèle Exarchopoulos) oneminyaka engu-15 ehlangana no-Emma onezinwele eziluhlaza okwesibhakabhaka (uLéa Seydoux), kuvusa okuthile ngaphakathi kuye. Izithameli zeminyaka yonke zizothokoziswa yile ndaba eyinkimbinkimbi futhi enothando lwesiFulentshi eguquka phakathi neminyaka eyishumi. (Ukuzikhulula: Kunamahora amathathu ubude, ngakho-ke qiniseka ukuthi ukhipha isikhathi esanele esimisweni sakho.)
36. 'Kubo Bonke Abafana Engibathandile Phambilini' (2018)
U-Lara Jean (uLana Condor) uzigcina eyedwa — kangangoba unenqwaba yezincwadi zothando ekhabethe lakhe, lapho avuma khona imizwa yakhe komunye nomunye wabaphuli bakhe. Lapho udadewabo omncane (u-Anna Cathcart) ngephutha athumela lezi zinhlamvu ngephutha, kulandela inhlanhla.
37. ‘Idayari kaBridget Jones’ (2001)
Sithanda ukuqalekisa, ukubhuza futhi ukuhlekisa kakhulu uBridget Jones (uRenée Zellweger) njengoba nje ekule comedy engenakuphikiswa eyadala ukulandelana okubili. Uma kukhona into eyodwa okusamele kube nenkulumompikiswano: Ingabe uyiqembu likaDarcy noma iqembu uCleaver? (Umbuzo okhohlisayo: UDarcy, kusobala.)
38. 'Uma iBeale Street Ingakhuluma' (2018)
UTish no-Alonzo (Fonny) bebengabangani kusukela ebuntwaneni kodwa izinhlelo zabo ngekusasa ziyaphazamiseka lapho uFonny eboshelwa icala angalenzanga. Kusethwe ngo-1970s iHarlem, le-flick ehambayo igxile ebophweni elingenakwephulwa lombhangqwana kanye nezithiyo okufanele bazinqobe ukuze babe ndawonye. Udutshulwe kahle, uzomangala (futhi ukhale) ngale ndaba yothando ethinta inhliziyo.
Ngaphansi kwezithombe zakho
39. 'Ukudansa Okungcolile' (1987)
Lapho uFrances 'Baby' Houseman (UJennifer Grey) echitha ihlobo endaweni yokubuka iCatskills nomndeni wakhe, uthandana nomqeqeshi wokudansa wabafana ekamu, uJohnny Castle (uPatrick Swayze). Yindaba yakudala enezimanga ezimbalwa kepha sizoyibuka kaninginingi lokho kuphakamisa.
I-20th Century Fox
40. 'Iphutha Ezinkanyezini Zethu' (2014)
Uma ungeke uyeke ukukhala ngesikhathi Uhambo Lokukhumbula , le yi-movie yakho. Kwethula ababukeli ezigulini ezimbili zomdlavuza ezilahla uthando olungenathemba: UHazel Grace Lancaster (uShailene Woodley) noGus Waters (Ansel Elgort). Le yindaba yabo ebuhlungu.
41. 'Usuku Olunye' (2011)
Impela, lokhu kuguqulwa kwefilimu okusuka kunoveli eshisayo kaDavid Nicholls enegama elifanayo akuyona iphelele (Indlela u-Anne Hathaway, ikakhulukazi, athola ngayo okuningi) kepha akunakwenzeka ukuthi ungathandani noDex no-Emma njengoba sibuka abangane ababili behlangana ngosuku olufanayo ngaphezu kweminyaka eyi-18.
Izithombe ze-Walt Disney Studios Motion
42. ‘Isiphakamiso’ (2009)
UMargaret Tate (uSandra Bullock) ungumhleli oyinhloko webhizinisi lokushicilela izincwadi, kanti u-Andrew Paxton (Ryan Reynolds) ungumsizi wakhe osebenza kanzima. Lapho uMargaret ebhekene nokudingiselwa eCanada, wenza uhlelo lokushada no-Andrew ukuze agcine isimo sakhe se-visa, futhi esikhundleni sakhe unikeza u-Andrew ukukhushulwa. Sicabanga ukuthi ungaqagela ukuthi kwenzekani ngokulandelayo (i-hilarity nothando, kunjalo).
Le ndaba ehambisanayo yothando oluyimfihlo phakathi kwabafana ababili bezinkomo inamandla, ibanga inhliziyo futhi yakhiwe kahle. Le ndaba igxile kumfuyi okuthiwa u-Joe Aguirre (Randy Quaid), oqasha uJack Twist (Jake Gyllenhaal) no-Ennis Del Mar (Heath Ledger) ukuthi basebenze epulazini lakhe.
44. 'Lapho uHarry Met Sally' (1989)
UMeg Ryan, uNora Ephron kanye neBig Apple — imidlalo eyenziwe kuma-rom-com heaven. Kuyifilimu emnandi ekhuluma ngama-quirky New Yorkers (afakwe uBilly Crystal) aqiniseka ukuthi abesilisa nabesifazane abakwazi ukuba ngabangane-noma bangaba njalo?
45. 'Indlela Esasiyiyo' (1973)
Odinga ukukwazi ukuthi izinkanyezi zikaBarbra Streisand kulokhu okuphikisanayo ziheha indaba yothando eyenzeka phakathi neminyaka eminingana. Kulungile, uRobert Redford naye ulingisa efilimini, futhi akunakuphikwa ukuthi iyinhle. Isiphetho.
46. ​​‘Ngaphambi kokuphuma kwelanga / Ngaphambi kokushona kwelanga / ngaphambi kwamabili’ (1995/2004/2013)
Kwi-movie yokuqala, indoda yaseMelika uJesse (Ethan Hawke) nowesifazane waseFrance uCéline (uJulie Delpy) bahlangana esitimeleni, behla eVienna bachitha ubusuku bonke bezungeza idolobha, bexoxa futhi bethandana. Ukulandelana kulandela le duo eminyakeni eyisishiyagalolunye kamuva eParis, kwathi eyesithathu yalandela eminye iminyaka eyisishiyagalolunye kamuva eGrisi. Uzofuna ukubeka eceleni yonke impelasonto futhi uzibuke zonke. Sithembe.
47. ‘Isiguli EsingumNgisi’ (1996)
Lokhu kuguqulwa kwezinkanyezi zenoveli zikaMichael Ondaatje uRalph Fiennes noKristin Scott Thomas njengabathandi ababili abangenangqondo eNyakatho Afrika phakathi neMpi Yezwe II. Yathola ukuphakanyiswa okungu-12 kuma-69th Academy Awards ngo-1997 futhi yawina imiklomelo eyisishiyagalolunye kubalwa neBest Picture. Uma ungabhongile ekugcineni, kusho ukuthi uyisilo. Ukuncokola kuphela. (Uhlobo lwe.)
48. 'Umshado Womngane Wami Omkhulu' (1997)
U-Julia Roberts ungumuntu wakhe ohehayo kule romance ye-screwball, kodwa kuyisimo sefilimu esimangazayo esikwenza kukufanele ukubukwa. O, futhi singakhohlwa kanjani nge ah-mazing sing-along scene to Aretha Franklin ethi I Say a Little Prayer.
49. 'NjengoCrazy' (2011)
Awusoze walukhohlwa uthando lwakho lokuqala, kodwa ngeshwa lomfundi wasekolishi waseBrithani (uFelicity Jones) nozakwabo afunda naye eMelika (u-Anton Yelchin), indaba yabo yothando ithatha ithuba elibuhlungu lapho ephula imigomo ye-visa yakhe futhi baphoqeleka ukuthi bahlukane. Uma i-movie izwa ukuthi iyiqiniso empilweni, kungenzeka ukuthi ngoba iningi layo belithuthukisiwe.
50. ‘Ulahlekile Ekuhumusheni’
Abantu ababili abangabazi (uScarlett Johansson noBill Murray) bakha isibopho esingalindelekile ngemuva kokuhlangana endaweni yokuphuzela amahhotela eTokyo. Ngokuyinhloko, iyifilimu ehambayo (futhi kwesinye isikhathi, ehlekisayo) ngokuthola ukuxhumana nomuntu lapho ubungakulindele.
UKate (Emilia Clarke) ukhathele ngumsebenzi wakhe wokusebenza njenge-elf yonyaka wonke esitobhini samaholide. Lapho ngokungalindelekile ehlangana nowesilisa ogama lakhe linguTom (uHenry Golding), ngokuzumayo uthola incazelo yangempela kaKhisimusi. Alexa, play 'Last Christmas' on Spotify.
Izithombe zeBuena Vista / Getty
52.'Izinto Ezi-10 Engizizondayo Ngawe'(1999)
UKat Stratford (Julia Stiles) nodadewabo omncane, uBianca (uLarisa Oleynik), bebengeke bahluke kakhulu komunye nomunye. Ngakho-ke, ubaba wabo (uLarry Miller) wenza umthetho wasekhaya othi uBianca akakwazi ukuthandana noKat aze abe nesoka. Uhlelo, yebo, lubuyela emuva.
URicardo Hubbs / Netflix
UNick (Damon Wayans Jr.) ubesezinsukwini zokuqala eziyi-1 000, futhi akakashadi. Ngakho-ke, uqasha ummeli ukuthi amangalele uhlelo lokusebenza lokuphola, okuthiwa lunezinga eliphezulu lokuphumelela. Njengoba kubikezelwe, uNick ngokushesha uthola uthando lapho engalulindele neze. (Futhi yebo, kubuye kube nezinkanyezi uRachael Leigh Cook.)
I-Sunset Boulevard / Getty Izithombe
Yize ekhula kancane, uForrest Gump (Tom Hanks) ungumfana omncane onomusa futhi onethemba, ngenxa kanina omesekayo (uSally Field). Impela, kuyadabukisa njengesihogo. Kepha ohlangothini oluhle, ungabudambisa ngokuphelele ubuhlungu ngebhokisi loshokholethi.
UKERRY BROWN / NETFLIX
Osemusha osanda kushada (uLily James) uvakashela ifa lomndeni womyeni wakhe, elisogwini lwesiNgisi. Inkinga? Kubonakala sengathi ukhohlwa ngowayengunkosikazi womyeni wakhe, uRebecca, ogama lakhe libhalwe cishe ezindongeni zendawo yokuhlala.
USimon ungumfundi oneminyaka engu-17 ubudala wasesikoleni esiphakeme ongakaze atshele noma ngubani — kufaka phakathi umndeni nabangane — ukuthi uyisitabane. Yebo, konke sekuzoshintsha. (Ngemuva kokuthi ubukile Uthando, Simon , qiniseka ukuthi uhlola uchungechunge lwe-Hulu olulingana ngokulingana, Uthando, uVictor .)
U-Alfonso Bresciani / Amafilimu e-CBS
57.'Izinyawo Ezinhlanu Zihlukene'(2019)
UStella (Haley Lu Richardson) noWill (Cole Sprouse) zombili iziguli ze-cystic fibrosis. Ngenxa yokugula kwabo, abavunyelwe ukuthintana futhi kufanele balondoloze ibanga elingamamitha ayisithupha. Njengoba uStella ezimisele ngokuphila ngemithetho yakhe, ushintsha imiyalo kadokotela ibe yizinyawo ezinhlanu (yingakho isihloko se-movie). Kuzwakala kujwayeleke kabi eminyakeni yobhadane lwe-coronavirus.
58.'Mina Phambi Kwakho'(2016)
Emzameni wokuziphilisa, uLouisa Lou Clark (Emilia Clarke) uhlala eshintsha imisebenzi. Umsebenzi wakhe omusha ubandakanya ukuba ngumnakekeli kaWill Traynor (Sam Claflin), ocebile, osebenza ebhange okhubazekile odinga kakhulu umbono omusha ngempilo.
59.'ILanga Libuye Liyinkanyezi'(2019)
UDaniel (Charles Melton) noNatasha (Yara Shahidi) bavela emazweni amabili ahlukene. Ngenkathi uDaniel efuna ukufeza okungaphezu kwalokho abazali bakhe abakuhlele kona, uNatashia wesaba ukuthi umndeni wakhe uzodingiswa. Lapho behlangana ngezikhathi ezithile bese bethandana, izinhlansi ziyahamba. (Ingasaphathwa, isuselwa ku- incwadi yamagama kaNicola Yoon .)
Izithombe zikaBrendon Thorne / Getty
60.'Uthando Nezinye Izidakamizwa'(2010)
UJamie Randall (Jake Gyllenhaal) ungumthengisi omuhle wemithi ongakaze abe nenkinga yokulanda abesifazane embonini yakhe eqhutshwa ngabesifazane. Lapho ehlangana nesiguli esencane sikaParkinson ogama lakhe linguMaggie (u-Anne Hathaway), baba nobudlelwano obusondelene naye angazange abubone buza.
OKUSHIWO: Ama-movie ama-Funny Lady angama-48 lapho udinga ukuhleka okuhle
61. ‘Uthando lukaSylvie’
Kusukela kumvunulo omangalisayo 'wama-50s nesikolo somculo kuya kuTessa Thompson noNnamdi Asomugha's chemistry enhle, akunakwenzeka ukungayithandi le filimu. Uthando lukaSylvie kulandela ubudlelwano bothando phakathi kwabafisa ukuba ngabenzi bamafilimu uSylvie Parker (Thompson) noRobert Halloway (Nnamdi Asomugha), ongumculi we-jazz odonsa kanzima.
bukela ku-Amazon Prime
62. 'Southside With You' (2016)
Uma usuqedile yonke imemo kaMichelle Obama ethengiswa kakhulu kunazo zonke, khona-ke usuvele unawo umqondo wokuthi yaqala kanjani indaba yakhe yothando nowayenguMongameli waseMelika uBarack Obama. Kulolu thando olumnandi, uParker Sawyers noTika Sumpter baveza lo mbhangqwana othandekayo njengoba bephuma ngosuku lwabo lokuqala ngo-1989.
63. 'Ukuthanda' (2016)
Idrama ekhuluma ngabantu ilandisa ngendaba engokoqobo kaRichard noMildred Loving, abamangali abasiza ukuvula indlela yemibhangqwana eminingi yezizwe ngezizwe ngecala elivelele leNkantolo Ephakeme iLoving v. Virginia ngo-1967.
64. 'I-Incredible Jessica James' (2017)
Ngemuva kokuhlukana kabuhlungu nesoka lakhe lakudala, uJessica James (Jessica Williams) ushaya ubudlelwano obusha nomuntu ongalindelekile. Kuzokuhlekisa futhi ikunikeze konke okuzwayo.
65. 'Njalo' (2011)
Lo mdlalo othinta inhliziyo waseNingizimu Korea ulandela umuntu obephethe indawo yokupaka nowayengumshayisibhakela owela entombazaneni engaboni. Lungisa izicubu, ngoba igcwele izikhathi ze-tearjerker.
OKUSHIWO: Ama-comedies angama-60 amahle kakhulu wezothando wesikhathi sonke
Izitayela ezi-5 zeHippie Fashion ezibuyiselwe ngokuphelele kwisitayela
Ukudubula: I-India Dominates ISSF World Cup, Bags Gold, Bronze
Ongakudla ne-Hummus (Ngaphandle kwe-Boring Old Crackers)
UMeghan, Kate noPippa Bonke Balambile Kule Mpelasonto (futhi Sinezithombe)
Izindawo ezi-10 ezihamba phambili zokuvakashela eNdiya phakathi kukaJanuwari noMashi
Abashintshi Bama-Peanut 11 Abazama Ukuzama Uma Ingane Yakho Inama-Alleries
Ingubo kaCharlize Theron Rocks Tie-Dye ku- 'The Addams Family' Premiere
Ama-Dessert aseBritish amaFancy angama-21 Ungawasusa Ngokuphelele Ekhaya
Konke Owafuna Ukwazi Ngesitayela seBohemian
Umbala Ophuma Phambili Wawo Wonke Amagumbi Endlini Yakho, Ngokusho kweSayensi
Izinto ezi-5 Ongahle Ungazazi Ngazo Zithi Yebo Engutsheni
Kuyini i-En Caul noma i-Mermaid Birth? Nakhu Okufanele Ukwazi Ngalezi Zidingo Ezimangazayo
ukuzivocavoca okwehliseni amafutha okhalweni
ukuma okweqanda ubuso bezinwele zezinsikazi
movie yothando engcono kakhulu yesikhathi sonke
ubopha kanjani isarong
uwoyela omnyama wembewu wezimpandla
Izindlela Zokupheka ZaseMexico Ezingama-Gluten Ezingeyona I-Taco Salad Enesithukuthezi
Izinwele Eziqondisa Izinwele Vs Blow Dryer Locks
Iyiphi i-Aloe Vera Gel Engcono Kakhulu Ongayisebenzisa Esikhunjeni Esicasukile?
The Best Rosé Wine Under $ 20 to Sip This Summer, Ngokusho kweSommelier
Izincwadi Eziyi-10 Ezisibambe Esigwebeni Sokuqala Kakhulu